घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » मदिरा र आत्माहरु » वाइन रिच इटाली केहि नयाँ छैन: अंगूर गो नेटिभ
पाक • संस्कृति • इटाली ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • मदिरा र आत्माहरु
इटाली संसारको एक मात्र देश हो जसको सबै क्षेत्रहरूमा भिटिकपालन छ, नम समुद्री तटबाट एपेनाइन पर्वत, इटालियन आल्प्स र डोलोमाइट्सको फेदसम्म फैलिएको छ। पेन्टेलेरियाको दक्षिणी टापुमा ३६ डिग्रीको अक्षांशबाट बेलहरू भल्टेलिनाको अल्पाइन उपत्यकामा ४७ डिग्रीसम्म बढ्छन्।
तिनीहरू धेरै फरक पेडोक्लिमेटिक जोनहरूमा बढ्छन् (माटो भित्रको एक सूक्ष्म जलवायु जसले तापक्रम, पानीको सामग्री र वातनको संयुक्त प्रभावहरूलाई एकीकृत गर्दछ)।
संसारका अंगूर प्रजातिहरूको लगभग 28 प्रतिशत इटालीको मूल निवासी हो।
इटालीको जमिनको सतहको 85 प्रतिशत भन्दा बढी लामो स्थापित प्रजातिहरू (यद्यपि कुनै पनि प्रजातिहरू प्रभावशाली नभए पनि) दागपालनमा समर्पित छ।
के त्यहाँ इटाली बिना रक्सी हुनेछ?
यो नोट गर्न चाखलाग्दो छ कि देशको गतिशील राजनीति (19 औं शताब्दीको दोस्रो आधा सम्म), र स्थानीय बजारको महत्त्व (1970 को दशकको अन्त सम्म), बढ्दो अवस्थाको विविधताले इटालीलाई संरक्षण गर्न नेतृत्व गरेको छ। समयको शुरुवातदेखि नै अवस्थित अंगूर प्रजातिहरूको अत्यन्त समृद्ध सम्पदा।
मदिरा विविध र जटिल छन्
राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा व्यापक रूपमा उब्जाइएको इटालियन रातो अंगूरको साङ्गियोभेसले राष्ट्रिय बेल उत्पादन गर्ने क्षेत्रको १२ प्रतिशत मात्र ओगटेको छ, जबकि यसको सेतो अंगूरको समकक्ष ट्रेबबियानो टोस्कानोले ७ प्रतिशतभन्दा कम ओगटेको छ, जसले इटालियन वाइन उत्पादनको परिदृश्यलाई आश्चर्यजनक रूपमा विविध बनाउँछ। एम्पेलोजिस्ट अन्ना स्नाइडरले अनुमान गरे कि इटालीमा लगभग 12 खेती गरिएका देशी अंगूर प्रजातिहरू छन् (7 को अनुसार)। अन्य विज्ञहरूले इटालीमा खेती गरिएका अंगूरका करिब १००० प्रजातिहरू आनुवंशिक रूपमा पहिचान भइसकेका छन् र ६०० वटा बनाउन प्रयोग भइरहेका छन्। व्यापारिक रूपमा महत्वपूर्ण संख्यामा मदिराहरू.
अंगूर प्रजातिहरूको राष्ट्रिय रजिस्ट्री
यदि अंगूरको जात राष्ट्रिय रजिस्ट्रीमा सूचीबद्ध छैन भने, व्यावसायिक नर्सरीहरूमा प्रजननका लागि प्रजातिबाट कुनै पनि बिरुवा सामग्री उपलब्ध गराउन सकिँदैन। हाल ४ सय ६१ आधिकारिक अंगूर प्रजाति छन्, तर निजी व्यक्ति र संस्थाले अन्यलाई समावेश गर्ने काम गरिरहेका छन्। इटालीमा रोपिएका शीर्ष बीस अंगूरहरू मध्ये, 461 देशी र चार अन्तर्राष्ट्रिय (मेर्लोट, चार्डोने, पिनोट ग्रिगियो र क्याबरनेट साउभिगन) शीर्ष दसमा मर्लोट र चार्डोनेसँग छन्।
अंगूरका प्रजातिहरू: तीन वर्गमा विभाजित
मूल निवासी (वा आदिवासी)
अन्तर्राष्ट्रिय (वा विदेशी)
अंगूरलाई मूल मानिन्छ यदि तिनीहरू एक विशिष्ट स्थानमा "जन्म" थिए र लगभग विशेष रूपमा त्यो स्थानसँग सम्बन्धित छन्। यो सम्भव छ कि धेरै तथाकथित "इटालियन नेटिभ अंगूरहरू" वास्तवमा ग्रीक वा मध्य पूर्वी मूलका हुन्, रोमन सेनापतिहरू, समुद्री यात्रा गर्ने फोनिशियन व्यापारीहरू र ग्रीक उपनिवेशहरूद्वारा आयात गरिएको। इयान डी'अगाटाले निर्धारण गरे कि, "कडाको रूपमा भन्नुपर्दा, सबै होइन इटाली को अंगूर त्यसकारण साँच्चै मूल निवासी हो र स्थानीय ती मूल प्रजातिहरू वर्णन गर्नको लागि राम्रो शब्द हुन सक्छ जसको उत्पत्ति स्पष्ट रूपमा इटालियन होइन ..."
नेटिभ अंगूरहरू (क्याबरनेट सउभिग्नन र चार्डोनेको विपरीत) कडा हुँदैनन् र सजिलैसँग प्रभावित हुन्छन्:
पुरातन वाइन बनाउने विधिहरू (अर्थात्, इष्टतम परिपक्वताको पर्वाह नगरी, एकै समयमा सबै अंगूरहरू छान्ने)
तहखाने स्वच्छताको अभाव (वाइन बिगार्न योगदान)
अंगूरको अनियमित परिपक्वता
नतिजा (केहि अवस्थामा):
मौलिक इटालियन वाइनको स्वाद अहिलेको वाइनभन्दा फरक छ
अंगूरले सानो मात्रामा उत्पादनको लागि अनुमति दिने खरानी गुच्छाहरू उत्पादन गर्दछ
केही प्रकारका मस्टहरू पूर्णतया अक्सिडाइज्ड र अम्लता रहित हुन्छन् जुन सुस्त, समतल वाइन प्रस्तुत गर्दछ।
अंगूरहरू पूर्ण रूपमा पाकेको छेउमा हरियो कच्चा जामुनको साथ विभिन्न समयमा परिपक्व हुन्छन्। कच्चा जामुन हटाउन सकिन्छ; यद्यपि, यो एक महँगो, समय खपत गर्ने प्रक्रिया हो जुन हात वा धेरै महँगो अप्टिकल क्रमबद्ध मेसिनले गरिन्छ। यदि क्रमबद्ध गरिएन भने परिणामस्वरूप वाइनमा हरियो तरकारी सुगन्ध र स्वाद हुने सम्भावना हुन्छ।
आधुनिक वाइनमेकिंग प्रविधिहरू इटालीको मूल अंगूरका लागि खतरनाक हुन सक्छ र खमीरको भूमिकालाई कम आँकलन गर्न सकिन्छ। अल्कोहल किण्वनमा प्रयोग हुने बिभिन्न खमीर स्ट्रेनहरूले समान माटोमा उब्जाएको एउटै अंगूरको विविधता प्रयोग गर्दा पनि फरक ईनोलोजिकल परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।
नेटिभ अंगूरका प्रजातिहरू (क्युरेट गरिएको)
1. Aglianico del Taburno DOCG (La Fortezza Soc. Agr. Srl)। 1986 मा DOC को रूपमा स्थापित; 2011 मा DOCG बन्ने। क्याम्पानिया, Basilicata (दक्षिणी क्षेत्रहरू) को मूल निवासी अंगूरले पूर्ण शरीर रातो र गुलाब उत्पादन गर्छ। Sangiovese र Nebbiolo सँगसँगै, Aglianico तीन उत्कृष्ट इटालियन प्रजातिहरू मध्ये एक हो। प्रायः यस किसिमको मदिरालाई अत्यधिक परिष्कृत, जटिल मदिरा उत्पादन गर्ने क्षमताको कारणले दक्षिणको बरोलो भनिन्छ। Aglianico बाट उत्पादित वाइन चकलेट र प्लम सुगन्धको साथ आँखामा गहिरो गार्नेट हुन्छ र दृढ टेनिंग, उच्च अम्लता र राम्रो बुढ्यौली क्षमताको साथ पूर्ण शरीर भएको हुन्छ। यो उमेर बढ्दै जाँदा, फल अधिक स्पष्ट हुन्छ र ट्यानिन्स बढी सन्तुलित हुन्छ।
2. ला फोर्टेजा। 100 प्रतिशत Aglianico del Taburno DOCG। आँखामा रुबी रातो, नाकले जंगली कालो जामुनको सुगन्ध फेला पार्छ। यो कालो चेरी जाम को सुखद नोट संग तालु मा नरम छ। अंगूर अक्टोबरको अन्त्यमा हातले काटिन्छ र 8 महिना स्टिलमा, थप 10 महिना ब्यारिकमा र त्यसपछि ब्यारेलमा बिताउँछ। यो मदिरा चुस्न अघि राम्रोसँग सफा गर्न आवश्यक छ। पास्ता, मासु (विशेष गरी रोस्ट, स्ट्यू र सस) र/वा पुरानो चीजसँग सेवा गर्नुहोस्।
3. Lambrusco Modena DOC (Cantina Ventiventi Societa Agricola Il Borghetto)। अंगूरहरू मोडेना प्रान्तमा उब्जाउनुपर्दछ र निम्न प्रजातिहरू (85-100 प्रतिशत) समावेश गर्नुपर्दछ: ग्रास्परोसा ल्याम्ब्रुस्को, लम्ब्रुस्को सलामी, लम्ब्रुस्को डि सोरबारा, लम्ब्रुस्को मारानी, ​​लम्ब्रुस्को मेस्ट्री, लम्ब्रुस्को मोन्टेरिको, ओलिभा लम्ब्रुस्को (एक्लै वा प्रयोग गर्न सकिन्छ। रंगको लागि एन्सेलोटाको थप) अंगूर, माल्बो जेनटाइल र/वा फन्टाना अंगूर (१५ प्रतिशतसम्म)। अंगूरले रुबी रंग, नाजुक सुगन्ध र फूलको नोटको साथ बढेको तालुमा मिठासको साथ चम्किलो रातो वाइन उत्पादन गर्दछ।
हावापानी तातो गर्मी र चिसो जाडो संग न्यानो छ। इमिलिया रोमाग्नाको मैदानको माटो खनिज लवणले धनी छ र पहाडको दाखबारीमा बालुवा ढुङ्गाको माटोले हावी भएको छ, जसले हल्का र जवान छँदा रमाइलो हुने मदिरा उत्पादन गर्छ।
मदिराहरू बोतलमा विकसित हुन सक्छ र प्रायः परम्परागत विधिहरू प्रयोग गरेर किण्वन गर्न सकिन्छ। थिच्ने 80 लिटर भन्दा बढी हुन सक्दैन जुन शैम्पेन भन्दा अलि बढी छ। किण्वन एकदम कम तापक्रम (२३-२५ डिग्री) मा ताजा फलको सुगन्ध कायम राख्न र थोरै संख्यामा ट्यानिन निकाल्न हुन्छ।
• Cantina Ventiventi रोज Lambrusco Di Modenado। शतप्रतिशत सोरबरा अंगूर ।
मेडोलाको मोडेनिज नगरपालिकामा रहेको यो दाखबारी रज्जबोनी परिवारको छ। दाखबारीले मेटोडो क्लासिको प्रयोग गर्दछ, ताजा र विशिष्ट मदिराहरू सिर्जना गर्दछ। 2019 मा प्रमाणित जैविक, मेकानिकल फसल दिनको सबैभन्दा चिसो घण्टाको लागि निर्धारित गरिएको छ। त्यसपछि अंगूरहरू चिसो र नरम थिचिन्छन्। किण्वन स्टेनलेस स्टीलमा नियन्त्रित तापमान र स्टीलमा लामो चिसो परिष्करण अन्तर्गत आयोजित गरिन्छ। बोतलमा अनिवार्य र माध्यमिक किण्वनको थप नियन्त्रित तापमान अन्तर्गत गरिन्छ।
आँखामा नरम गुलाबी, रातो फलहरूले नाकलाई पुरस्कृत गर्दछ। खनिज द्वारा सन्तुलित तालुमा नरम र स्वादिष्ट। बेहोस र लगातार पर्लाजले ताजगी बढाउँछ। समुद्री खाना संग जोडी।
4. Trebbiano d'Abruzzo DOC (फ्रान्सेली Ugni Blanc जस्तै)
Abruzzo मध्य-पूर्वी इटालीमा एड्रियाटिक सागरको तटमा अवस्थित एक वाइन क्षेत्र हो। आधिकारिक DOC कानून अनुसार, Trebbiano d'Abruzzo वाइन कम्तिमा 85 - 100 प्रतिशत Trebbiano Toscano वा Trebbiano Abruzzese वा दुई समूहहरूको संयोजनबाट बनाइनुपर्छ।
Trebbiano d'Abruzzo अंगूर 1856 मा Raffaele Sersante द्वारा दस्तावेज गरिएको थियो जसले दाखबारीमा अंगूरको विविधताको लोकप्रियता र प्रचलनलाई नोट गर्यो। यो एक उच्च उपज सेतो दाखमद्य अंगूर हो जुन दक्षिण-पूर्वी भूमध्यसागरमा उत्पन्न भएको हो। यो अर्गिलो-चोनायुक्त माटोमा राम्रोसँग उब्जाउ हुन्छ। हाल देशमा सेतो मदिराको आधाभन्दा बढी बिरुवा रोपणले ओगटेको छ।
मदिराहरू सुनौलो रंगका हुन्छन्, सामान्यतया सुख्खा र फलहरू - पहेंलो फल, स्याउ, कागतीको छेउ र नाकमा सेतो फूलहरूको नरम गुच्छाको साथ अगाडि। तालुले सन्तुलित, प्रेरणादायक अम्लता, सूक्ष्म, सुरुचिपूर्ण पहेंलो प्लमहरू फेला पार्छ। केही उत्पादकहरूले जटिलता, गहिराई र शरीर थप्न ब्यारेल किण्वन र/वा ब्यारेल परिपक्वता प्रयोग गर्छन्। यो सेतो वाइनमा विशेष रूपमा विशेषज्ञता प्राप्त गर्ने Abruzzo मा एक मात्र DOC हो। जवान र चिसो पिउनुहोस्। समुद्री खाना पास्ता, रिसोट्टो, तरकारी सूप, ओवन-बेक्ड वा ग्रील्ड माछा संग जोडी।
• Azienda Vinicola Talmonti। 100 प्रतिशत Trebbiano
अब्रुजीमा डि टोन्नो परिवारद्वारा सुरु गरिएको ३२ हेक्टरको दाखबारी चुनढुङ्गाको माटोले बनेको छ, समुन्द्री सतहबाट ३०० मिटर उचाइमा संरचना र निकास भएको माटो। सेप्टेम्बरको शुरुमा अंगूरको सावधानीपूर्वक चयन गरिन्छ। अंगूरका डाँठहरू हटाइन्छ र त्यसपछि स्टेनलेस स्टीलमा कुचिएको अंगूरको छोटो चिसो मेसेरेसन पछि नरम थिच्ने र आवश्यकलाई हटाउने गरिन्छ। चयन गरिएको खमीरको साथ अल्कोहल किण्वन 32 दिनसम्म रहन्छ; बोटलिङ फसल काटेको केही महिना पछि हुन्छ।
हल्का हरियो रङसहितको फिक्का परालको रंगले आँखालाई रमाइलो बनाउँछ, नाकमा स्याउ, चेरी र पीचको सङ्केतसहित बैंगनीको फूलको सुगन्धले बढाएको धनी गुलदस्ता प्रस्तुत गर्दछ। ब्यारेलमा थोरै समय बिताउँदा ट्यानिन्सको साथ एक वाइन उत्पादन हुन्छ जुन घना तर अबाधित हुन्छ र फाइनल कुरकुरा, सफा र ताजा हुन्छ। Aperitif को रूपमा सेवा गर्नुहोस् र/वा चिकन, समुद्री खाना, पोर्क वा ह्याम संग।
Aglianico इटाली को दक्षिणी क्षेत्रहरु (Basilicata र Campania) मा उब्जाएको कालो अंगूर हो। यो ग्रीसमा उत्पत्ति भएको र एक अज्ञात पुर्खाको दाखिलाबाट Phocians द्वारा खेती गरिएको मानिन्छ; यद्यपि, आधुनिक डीएनए विश्लेषणले यस दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्दैन किनकि यसले अन्य ग्रीक अंगूर प्रजातिहरूसँग थोरै सम्बन्ध देखाउँछ। विविधता पहिलो पटक स्त्रीलिंगी बहुवचन Aglianiche (1520) को रूपमा छापिएको थियो। ओनोलोजिस्ट डेनिस डुबाउडिउले निर्धारण गरे कि "एग्लियानिको सम्भवतः सबै भन्दा लामो उपभोक्ता इतिहास भएको अंगूर हो।" यो रोमन समयमा फालेमियन वाइन बनाउन प्रयोग भएको थियो, पुरातन रोममा उत्पादन गरिएको सबैभन्दा प्रसिद्ध रक्सी र प्लिनी एल्डर द्वारा अनुकूल मानिन्छ।
Agianico संरचना, जीवन्त अम्लता र उमेर क्षमता संग एक रेड वाइन हो। फूलको सुगन्ध, र कहिलेकाहीँ अभेद्य ट्यानिनहरू सुगन्धित खनिजको आनन्द लिन खोज्दा घुसपैठ गर्छन्। यो बहुमुखी छ, र यस विविधताबाट मदिरा युवा र उमेर राम्रोसँग रमाइलो गर्न सकिन्छ। बारोलो र बार्बरेस्कोको ठूलो अंगूर, नेबबियोलोसँग प्रायः तुलना गरिन्छ। नेपल्स, पोम्पेई, अमाल्फी कोस्ट, सालेर्नो र पेस्ट्रम सहित दक्षिणी इटालीको Tyrrhenian सागरबाट क्याम्पानिया क्षेत्रसँग सम्बद्ध। Basilicata मा फस्टाउँछ।
(ला गार्डियन्स - सन्नियो २०१४)। 100 प्रतिशत Aglianico
आँखा गहिरो र गाढा रातो रङले हर्षित हुन्छ जबकि नाकले भेनिला (ब्यारेलबाट) संग चेरी मिश्रणहरू पत्ता लगाउँदछ, मसालेदार नोटहरूसँग मिसिएको। तालुलाई ट्यानिन्सले मनोरञ्जन गरिन्छ जसले नरम र रेशमी स्वादको अनुभव सिर्जना गर्दछ।
अक्टोबरको दोस्रो आधामा अंगूर काटिन्छ। छालामा 18 दिनसम्म मकरेसन गर्दा दैनिक केही पम्पिङ गर्दा २० प्रतिशत रगत बग्छ। उत्तम apres-स्की; पास्ता/मासुको चटनी, तरकारीको सूप, सुँगुरको मासु, भेडाको रोस्ट, र ठीक भएको मासुसँग जोड्नुहोस्।
6. Sfozato (अंगूर को जबरजस्ती) DOCG
स्फोजाटोले उत्तरी इटालीको लोम्बार्डी क्षेत्रको भल्टेलिना जिल्लामा नेबबियोलो अंगूरको विविधतामा आधारित शक्तिशाली रेड वाइन उत्पादन गर्छ। यसले अंगूर (पासिटो) सुकाएर उच्च अल्कोहल स्तर र अधिक एकाग्रता प्राप्त गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो अंगूर चयन गरिन्छ र कुनै पनि सडे वा बिग्रिएको जामुन हटाउनु पर्छ किनकि सुकाउने प्रक्रियाले अपूर्णताहरूलाई केन्द्रित गर्दछ।
पूरै गुच्छाहरू राम्रोसँग हावायुक्त तहखानेहरूमा परालको म्याटहरूमा राखिन्छन् जहाँ तिनीहरू 3-4 महिनासम्म रहन्छन्, प्रत्येक बेरीले यसको वजनको लगभग 40 प्रतिशत गुमाउँछ जसमा अंगूरको प्राकृतिक चिनीहरू केन्द्रित हुने पानीको वाष्पीकरणको कारणले गर्दा। जुस मीठो सिरपमा परिणत हुन्छ र क्लासिक स्फोर्जाटोले पूर्ण शरीर भएको वाइन उत्पादन गर्छ, जसमा अल्कोहलको मात्रा उच्च हुन्छ र मीठो मसला (जस्तै, लिकोरिस, लौंग र दालचीनी), स्ट्युइड प्लम, प्रुन र किसमिसको जटिल सुगन्ध प्रदान गर्दछ। टार र गुलाब को संकेत।
दाखबारी 1986 मा अल्बर्टो मार्सेट्टी द्वारा स्थापित गरिएको थियो र उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि नेबबियोलोमा सही मौसम परिस्थितिको साथ स्वादको समृद्धि छ। 10-हेक्टरको दाखबारी Sondrio मा अवस्थित छ जहाँ माटो चट्टान को विघटन को कारण माटो बलौटे छ।
Sfursat della Valtellina DOCG Valtellina वाइनको सबैभन्दा पुरानो हो। ओर्टेन्सियो ल्यान्डो (१५४०) ले यसलाई उद्धृत गरे र अन्य कागजातहरूले स्फोर्जाटोलाई 1540 को शुरुवातमा उल्लेख गरे। रक्सी पारिवारिक प्रयोगको लागि हो र रोगहरूको लागि पुनर्स्थापना औषधिको रूपमा प्रशासित गरिएको थियो। आज विविधता Valtellina को एक महान रक्सी को रूप मा जानिन्छ। ब्यारिकहरूमा उमेर पुग्दा, रक्सीले नरम ट्यानिन्स र राम्रो अम्लताको साथ रक्सीमा मोरेलो-चेरीको तीव्र गन्ध विकास गर्दछ। गाढा चकलेटसँग जोड्नुहोस्।
नेटिभ अंगूरको भविष्य
दुर्लभ अंगूरहरू अस्पष्ट, गूढ, अनौठो, स्वदेशी, अटोचथोनस वा बिर्सिएका जस्ता धेरै शब्दहरूद्वारा चिनिन्छन्। औसत वाइन उपभोक्ताले सोच्न सक्छ कि किन सोम्स वा वाइन गीक्सहरू पुरानो अंगूर "खोज" को लागी धेरै उत्साहित हुन्छन्। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि अस्पष्ट अंगूरबाट बनेको वाइनको चुस्की लिनु निश्चित रूपमा "उच्च" हो किनकि यसले वाइन पिउनेको लागि भिन्नता र स्वादमा परिवर्तन प्रदान गर्दछ। वाइन संसारमा विविधताको माग बढ्दै गएको छ र सयौं (वा हजारौं) अंगूरका प्रजातिहरूको सम्भाव्यता मिशनको रूपमा मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, बिरुवाको संसारमा विविधताको संरक्षण गर्ने, तर ग्लोबल वार्मिङको सामनामा रक्षाको लाइन पनि प्रदान गर्दछ।
युरोपभरका वाइन क्षेत्रहरूले दुर्लभ स्वदेशी प्रजातिहरू जोगाउन नर्सरीहरू सुरु गरेका छन्। फ्रान्सको दक्षिणमा, Domaine de Vassal, एक राज्य-स्वामित्वको नर्सरी (1878) ले लगभग 7800 प्रजातिहरू राख्छ, जुन संसारमा सबैभन्दा ठूलो संग्रह हो। साभोई, फ्रान्समा, अल्पाइन एम्पेलोग्राफी केन्द्रले दुर्लभ प्रजातिहरू खोज्छ। यसको आफ्नै नर्सरी छ, माइक्रो-भिनिफिकेशन गर्छ र वार्षिक सम्मेलन गर्छ। Lean-Luc Etievent र Arnaud Daphy द्वारा सुरु गरिएको वाइन मोजाइकले भूमध्यसागरको मूल अंगूर प्रजातिहरूको संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्छ।
धेरै "दाखहरूका रक्षकहरू" विश्वास गर्छन् कि मौसम परिवर्तनले भविष्यमा फरक-फरक अंगूरहरू उब्जाउन आवश्यक छ, जुन चाँडै पक्छ, घामले सजिलै पोल्छ वा मुख्यधारका प्रजातिहरू भन्दा राम्रो अम्लता वा ट्यानिक संरचना दिन्छ। कमजोर उत्पादन नतिजाका कारण पुराना जातहरू छाडिँदै गएका छन् र मूलधारका जातहरू जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छन्। वाइन संसार परिवर्तनको लागि तयार हुन र नयाँ समाधानहरूको लागि पुरानो प्रजातिहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गर्दैछ।